Guddiga arimaha gudaha Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la qaatay wasiir Sabriye iyo Xaliimo Yaray . - Awdinle Online
Guddiga arimaha gudaha Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la qaatay wasiir Sabriye iyo Xaliimo Yaray .
Kulan ay isugu yimaadeen Guddiga Arrimaha Gudaha, iyo Amniga ee Golaha Shacabka ayaa maanta ka dhacay xarunta xaruta ku meel gaar ah ee golaha shacabka ee Villa Hargeisa.
Ajandaha kulanka ayaa ku saabsanaa wax-ka-beddelka iyo Kabista Sharciga Axsaabta Siyaadda dalka kaas oo shalay wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu ka hor aqriyay golaha Shacabka Soomaaliya.
Kulanka waxaa shir guddoominayey Guddoomiye Ku-xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey , sidoo kale waxaa goob joog ahaa guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad.
Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Faderaalka iyo dib u heshiisiinta Xukumada Faderaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo ismaaciil Ibraahim (xaliimo yareey).
Wasiirka arimaha guddaha iyo guddoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa goddoonka golaha shacabka iyo Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga uga warbixiyay wax ka badel ay si wadajir ah ugu sameeyeen wax-ka-beddelka iyo Kabista Sharciga Axsaabta Siyaadda oo haatan muhiimad gaar ah u leh arimaha doorashooyinka dalka.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xiray ayaa uga mahadceliyay wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka sida wanaagsan oo ay uga wada shaqeeyeen wax-ka-beddelka iyo Kabista sharciga Axsaabta Siyaasadda dalka.
Inkastoo ay xildhibinada golaha shacabka ay ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka guddiga ayaa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinku uun wali cadayn in dalka ka dhacayso doorasho iyo nuuca ay noqonayso.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa socday kulamo ay lahaayeen Gudoonka goloyaasha Baarlamaanka, wasiiro ka tirsan Xukumada Soomaaliya, Madasha xisbiyada mucaaradka iyo wakiilo ka socday xubnaha beesha Caalamka ee Soomaaliya waxaana inta badan looga hadlay arimaha doorashooyinka dalka.
Previous articleShirkii Golaha Wasiiradu oo baaqdey Waa Maxay tahay sababta ?
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo soo dhoweysay Guddiga uu magacaabay Cabdi Xaashi